“Shirka Ingiriiska Wali Somaliland Si Sharci Ah Casuumad Looguma Soo Dirin, Qaranku Wuxuu Ka Tashanayaa Markaanu Ogaano Meeqaamka Iyo Sharafta Ay Somaliland Ku Tagayso” Wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland | Cadceed newssite
“Shirka Ingiriiska Wali Somaliland Si Sharci Ah Casuumad Looguma Soo Dirin, Qaranku Wuxuu Ka Tashanayaa Markaanu Ogaano Meeqaamka Iyo Sharafta Ay Somaliland Ku Tagayso” Wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland
Jan 26, 2013 Addis ababa(Cadceed) Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibeda Somaliland Maxamed C/laahi Cumar oo shir jaraa’id ku qabtay Hotelka Hilton oo ay ku sugnaayeen Suxufiyiin Reer Somaliland ah oo u jooga Dalka Itoobiya Shirka Midawga Afrika ayaa beesha Caalamka ugu baaqay inay dib u furto wadahadaladii Somaliland iyo Somaliya, isagoo sheegay Somaliland wali inaanay Martiqaad ka hyanin shirka Ingiriiska ka dhici doona ee loo qabanayo Somaliya.
Sidoo kale Wasiirka Arrimaha Dibedu waxa uu sheegay wadahadalada SoMALILAND IYO Somaliya inaanay waxba u dhimaynin qadiyadii Ictiraaf raadinta Somaliland, isagoo sheegay Somaliland inaanay u dabranaan doonin Somaliya ee ay Beesha Caalamka iyo saaxiibada ay leedahayba kala hadli doonto Qadiyadooda.
Wasiir Maxamed C/laahi waxa kale oo uu ka hadlay imaatinkooda Adis ababa oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid ay ugu ololaynayaan Qadiyadda Somaliland, isagoo sheegay mudadii ay joogeen inay la kulmeen wufuud ka kala socotay Kenya, Masar iyo Jarmalka, kuwaasi oo ay kala hadleen sidii ay u taageeri lahaayeen Somaliland.
Kulankaasi uu saxaafadda u qabtay Wasiirka Arrimaha Dibeda waxa lagu weydiiyay su’aalahan oo dhinacyo kala duwan taabanaya:-
Su’aal : Wasiir imaatinkiina shirka ka socda Addis ababa maxaad ku qiyaasi lahayd?
Jawaab: shirkan waxaad moodaa inuu xooga saarayo xurgufaha ka dhex jira qaaradda Afrika, hase yeeshee ka Somaliland ahaan sanad kasta marka shir caynkan oo kale ahi ka socda Addis ababa waanu ka soo qayb gali jirnay si aanu kulamo ka baxsan shirka ula yeelano wufuuda ka imanaysa dunida daafaheeda kala gedisan. Intii aanu halkan nimidna nasiib wanaag waxa noo suurogashay inaanu dhawr Dal wufuudooda la kulano waxaana ka mid ahaa wefdigii Dawladda Kenya ee uu hogaaminayay Wasiirul khaarajiyaha Dalkaasi, wufuud ka socotay Dalka Masar iyo saaka oo aanu la kulanay kuwo ka socday Dalka Jarmalka, kuwo kalena way noo hadheen intabana waxaanu kala hadlaynay qadiyada arrimaha dibeda Somaliland iyo sidii aanu taageero uga heli lahayn.
Su’aal: wasiir, waxa caawa soo gabagabaysmaya kulankii wasiiradda maxaad ka filaysaa inay ka soo bixi doonaan?
Jawaab: waxaanu ka filaynaa inay ka soo bixi doonaan waxyaabo ku waajahan qadiyadda Somaliland iyo madax banaanideeda, Somaliland waa go’aan shacab ku salaysan rabitaanka Somaliland iyo qawaaniinta iyo shuruucda Somaliland, waxaanu jecelnahay mar labaad Beesha Caalamku inay go’aankaas shacbi ee Golayaashiisa leh nagu taageeraan. Waxaanu jecelnahay beesha Caalamku inay naga taageerto dhibaatooyinka Somaliland ku xeeran si aanay Nabadgelyadda iyo deganaanshaha wax nooga yeelin.
Su’aal: wasiir kal hore xiligan oo kale waxaad timaadeen halkan, marka laga yimaado Wufuuda kale ee aad la kulanteen waxa la yidhi Oodi Ab ka dhaw wadahadaladii dhinaca Ganacsiga ee aad la lahaydeen Itoobiya ma kala hadasheen halkayse idiin marayaan?
Jawaab: arrintaa Ganacsiga Doorkan halkan umaanaan iman inaanu ka hadalno, laakiin arrimtaasi waa mid socota dhawaan Diridhaba wefti ilaa dhawr iyo labaatan ah ayaa yimi oo ka qayb qaatay wadahadaladaasi, mid heer wasiiro ahna waa loo balansan yahay, laakiin arrinta aanu imika u nimid waxa weeyi inaanu ka ololayno dalalka aanu isleenahaya waxa loo baahan yahay inaad taageero siyaasadeed ka heshaan.
Su’aal: Wasiir, Somaliland iyo Somaliya waxa u furmay wadahadalo, bisha May-na waxa jira shir kale, Madmadow baa ku jira saamaynta ay Somaliland shirkaas ku yeelan doono sidii kii kal hore, maxaad nooga sheegi kartaa doorka ay Somaliland ku leedahay shirkaaasi?
Jawaab: shirkaas go’aanba kamanaan qaadan inaanu ka qayb galayno iyo inkale, wali Somaliland si sharci ah Casuumad looguma soo dirin, Qaranku wuxuu ka tashanayaa markaanu ogaano meeqaamka iyo sharafta ay Somaliland ku tagayso ee aanu ogaano waxa nooga soo kordhaya, markaanu arrimahaas ka dheregno ayaanu mawqif cad ka bixin doonaa, laakiin imika shir Somaliland lagu soo casuumay oo aanu arrimihiisa go’aan ka qaadanay ma jiro.
Su’aal: Wasiir sida aad sheegtay waxaad halkan u timaadeen Ololayn siyaasadeed oo la xidhiidha qadiyada Somaliland, waxa soo baxaya dareeno ka dar-daar warinaya siyaasadii Arrimaha Dibeda ee Somaliland, waxaad lumiseen safaaradihii Somaliland ay ku lahayd dibedaha, Baasaaboor Somaliland ka dalalkii lagu tagi jiray ee South Sudaan, maleesiya iyo South Afrika intuba way istaagaan, miyaanay haboonayn inta aad sanadkiiba mar u imanaysaan halkan Olole siyaasadeed inaad kuwaas joogtaysaan oo ay shaqeeyaan, ta kale maadaama oo ay kuwaasiba soo xidhmneen waxa laga cabsi qabaa Itoobiya lafteeda oo aynu dano badan ku leenahay inay inaga xidhanto maxaa damaanad ah inaanay taasina dhicin?
Jawaab: arrintaas arrin borobogaando ah ayaan u arkaa, waxaan u arkaa arrin aan jirin. Somaliland waxa ay la leedahay dalalka aynu jaarka nahay xidhiidh adag, haday Itoobiya tahay, haday Jabuuti tahay, haday Kenya tahay, haddii ay tahay kuwaas kale ee aad tilmaantay intuba hawlaha qaranu si fiican bay uga socdaan waxaananu ku leenahaya Wakiilo. Waxaan u arkaa Arrin borobogaando ah oo ay fidinayaan dad aan jeclayn Somaliland oo aan u dhalan, markaa saxaafadda Somaliland waxaan ugu baaqaynaa inay ka fiirsato asalkooda, waa arrin ay fidinayaan dad cadaw u ah Somaliland. Itoobiya waxaynu leenahay xidhiidh Ganacsi, Mid Nabadgelyo iyo mid siyaasadeed markaa wax suuroobaya maaha in xafiiskeenu xidhmo waana arrin aan jirin.
Su’aal: dhawaan waxay warbaahinta Somaliland qortay in Safaaradda Itoobiya ee Somaliland u isticmaasho hawlaheeda shaqo wax ka baxsan Nidaamka Dublamaasiyadeed, oo arrimo aanu dhaqan ahaan wanaagsanayn magaca safaaradaasi lagu soo geliyo Somaliland, maadaama oo aad tahay wasiirkii arrimaha dibeda ee Somaliland maxaad ka odhan lahayd?
Jawaab: arrintaas Dawlada ahaan aad iyo aad baanu uga xunahay ugu horayn, safaaradda Itoobiya iyo Dawladoodaba raaligelin baanu ka siinaynaa arrintaas, waana arrin muujinaysa masuuliyad darada ay ku kacayaan qaybo ka mid ah saxaafadda Somaliland oo ay had iyo jeer samayso loomana baahna. Waxaanu u aragnaa safaaradda Itoobiya ku leedahay Somaliland mid ka shaqaysa xidhiidhka labada Dal inuu hagaago, waana saafard xooga saaraysa xidhiidh Ganacsi iyo mid dhaqaale inuu dhex maro, waxaanan filayaa inaanay ku kicin wax wax u dhimaya labada dal, mana filayo inay arrimo Ganacsi ku jiraan oo aan hawlahooga ahayn. Waxaanan jecelahay in ay saxaafaddu arrintaa mar danbe ku kicin oo ay ka waantawdo. Waana arrin Qaranka ceeb ku ah.
Su’aal: Wasiir waxa shalay qabsoomay shirkii wasiirada Midawga Afrika, Somaliland shirkaasi kamay muuqan. Dadka siyaasadda Odorosaa waxay u aanaynayaan wadahadaladii Somaliland iyo Somaliya inay sabab u tahay oo waxay leeyihiin waxay Dawladaha Afriki ka war sugayaan waxa ka soo baxa wadahadaladaasi, miyaanay jirin inaad lumiseen fursadii Somaliland kaga ololayn jirtay shirarkaas ee gaadhsiisnaa heer xataa ay Goob-jooge ka noqon jirtay mararka qaarkood?
Jawaab: horta aan ku saxo Somaliland waligeed kamay qayb galin shirka midawga Afrika. Somaliland maaha xubin ka mid ah midawga Afrika, manay lahayn xubin sharafeed ay waligeed kaga qayb gashay shirkaasi. Ta labaad wadahadalada Somaliya iyo Somaliland waa wadahadalo soo nooleeyay magacii Somaliland ee Adduunka, waa wadahadalo ka dhigaya Somaliland iyo Somaliya halkii barigii hore ee aanay isku dhafnayn, waa wadahadalo ka yeelaya cidina inaanay cida kale jujuubayn. Taa waxaan u arkaa arrin u soo korodhay Somaliland oo aan waxba yeelayn qadiyadii Ictiraaf doonka iyo xorriyadda Somaliland. Wadahadaldu waa runtaa oo waxa loo baahnaa markii Dawladda cusub ee Somaliya la sameeyay inay dib u bilaabmaan, laakiin sida laga war hayo Dawladda Somaliya waxay ku jirtay sidii ay hay’adaheeda u dhisi lahayd anagu geestayadase diyaar baanu ka nahay, waxaananu beesha Caalamka ka codsanaynaa in shirkaas si dhakhso ah dib loogu bilaabo oo ay dunidu ka soo qayb gasho oo aanu halkaas ku cadayno madax banaanidayada haddii taas la waayo Somaliland uma dabranaan doonto Somaliya, waxaananu beesha Caalamka iyo saaxiibadayaba ka dalbanaynaa in ay na Iciraafaan, Qaranimadaya waxa goostay Shacabka Somaliland, maaha mid u dabran ama ku xidhan waxay Somaliya ka yeesho. Laakiin waa dariiq Dublamaasiyadeed oo ku soo biiray arrinta Somaliya iyo Somaliland waana arrin aanu jecelnahay in laga midho dhaliyo, hadduuse hagaagi waayo maaha mid ay Somaliland u dabranaan doonto, waanay noo socdaan wadahadaladii kale ee aanu Dunida la lahayn.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland waxa socdaalkiisa ku wehelinayay Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada Maxamud Xaashi Cabdi